Ny fehezan-teny roa ora nataon'i Apple dia nihena ho 7 minitra amin'ity horonantsary ity | Avy amin'ny mac aho
Ny tena marina dia ny keynote omaly antoandro dia toa ahy ho iray amin'ireo tononkira tena mahaliana sy vaovao izay notanterahin'i Tim Cook's Apple. Ho fanampin'ny vaovao ihany sy ny "adin-tsaina" niaretan'ny ekipan'i Soy de Mac hifehezana ny Twitter, ny tranonkala, ny lakilen'ny fitenenana ary maro hafa, nandeha haingana ny ora roa sy ny famelabelarana kely.
Saingy mazava ho azy fa tsy ny olona rehetra no te-hijery fampisehoana lava toy izany ary noho izany dia efa ananantsika ity horonantsary famintinana 7 minitra kely ity, izay ahafahantsika mahita ny vaovao tsirairay natolotr'i Apple ho an'ny rafitra fiasan'izy ireo.
Izany no Horonantsary 7 minitra MacRumors mamintina ny vaovao amin'ity WWDC ity:
Ny tena marina dia nisy vitsivitsy ny zava-baovao natolotry ny mavesatra an'i Apple, navelan'izy ireo hanao vazivazy tamin'io fampisehoana io ihany ary indrindra ny filoha lefitra lefitra misahana ny fikirakirana rindrambaiko, Craig Federighi. Federigi, dia ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa ny olona mety amin'ny famelabelarana, saingy tsy io ny olana eo akaiky eo.
Ny keynote voalohany tamin'ity kaonferansa ho an'ny mpamorona ity dia nanana ny tsy fisiany, ny fitaovana. Manantena aho fa ho tratry ny bandy avy any Cupertino izy ireo ary hasehony antsika haingana fa tsy taty aoriana ireo fanovana amin'ny MacBook Pro, efijery thunderbolt na koa ny router an'i Apple, ny Airport. Ho avy izao ny fotoana aharetana amin'ny fitaovana sy miandry aorian'ny fahavaratra hijerena raha tena marina ny tsaho na lasa tsinontsinona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Ny fehezanteny roa adin'i Apple dia nihena ho 7 minitra tamin'ity horonan-tsary ity